လက်ကား Metering Pumps၊ Dosing Pump ထုတ်လုပ်သူများ၊ Solenoid ဆေးထိုးပန့်များ ပေးသွင်းသူများ - Dongkai Pump Technology
Dosing Pump ၊
Mechanical Diaphragm Metering Pumps များ
လျှပ်စစ် Diaphragm Pump
အရည်အတွက် Packaged Dosing စနစ်
Metering Pump ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သုတေသန၊ မီတာတိုင်းတာရေးပန့်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု၊ ဆေးထိုးကိရိယာအစုံအလင်ကို အထူးပြုသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း၊
ဝင်ရိုးငါးခုပါ စက်ယန္တရားစင်တာ၊ ဝင်ရိုးသုံးဝင်ရိုးစက်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ CNC စက်ကိရိယာ၊ အချင်းတူးစက်၊ ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ အထွေထွေစက်၊ ထွင်းထုစက်...
စက်မှုနှင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ရေနံဓာတုဗေဒ၊ အစားအစာ၊ စက်မှုရေသန့်နှင့် သန့်စင်သောရေ၊ ဆေးဝါးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
ဆိုက်တွင် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းတို့ကို ပြည့်မီစေရန် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ဝယ်ယူသူများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Alkali Dosing Pumps များ၊
Zhejiang Dongkai ပန့်နည်းပညာ Co.,Ltd. Metering pumps၊ Dosing pumps၊ Solenoid dosing pumps၊ Hydraulic metering pumps၊ Plunger metering pumps၊ Diaphragm Metering Pumps စသည်တို့ကို ဒီဇိုင်း၊ တီထွင်မှု၊ သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းအတွက် အထူးပြုသော နည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများအား အရည်အသွေး အာမခံချက် ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ မြန်သည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ရန်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပြီး၊ သင့်အား အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးသည့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အလူမီနီယမ်လျှပ်စစ် Diaphragm Pump
ပလတ်စတစ်များ လေဖြင့်လည်ပတ်နေသော Diaphragm Pump
Spring Return Diaphragm Metering Pumps များ
Mechanical diaphragm metering pump ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နိယာမ
ပန့်တွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်- ဂီယာအဆုံးနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်အဆုံး (ပန့်ခေါင်း)။ပန့်၏ အထွက်စီးဆင်းမှုသည် ဂီယာအဆုံး၏ လေဖြတ်နှုန်း၊ ဒိုင်ယာဖရာမ် (ပန့်ခေါင်း) ၏ အချင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်း၏ အလျားပေါ်မူတည်သည်။ diaphragm။
metering pumps ၏ ကွဲပြားသော အမျိုးအစားများ
Metering pump ကို quantitative pump သို့မဟုတ် proportional pump ဟုခေါ်သည်။ မီတာတိုင်းတာရေးပန့်သည် အမျိုးမျိုးသော တင်းကျပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော အထူးအသံအတိုးအကျယ်ပန့်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စီးဆင်းမှုနှုန်းကို 0-100% အကွာအဝေးတွင် အဆင့်ဆင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
မီတာတိုင်းတာခြင်းပန့်အကြောင်း အသိပညာ- မီတာတိုင်းတာရေးပန့်ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုသောအခါ အဘယ်အရာကို သတိထားရမည်နည်း။
မီတာတိုင်းတာခြင်းပန့်များကို ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသောအခါ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို ဂရုပြုပါ။ Metering Pumps များသည် စက်ရုံမှမထွက်မီ ပုံမှန်အပူချိန်တွင် သန့်ရှင်းသောရေ၏ စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်ပြီး စမ်းသပ်မှုရလဒ်များနှင့် flow calibration curve ကို လက်မှတ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ပထမ 12 နာရီကြာ လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ အသုံးပြုသူသည် ရရှိရန် ပန့်ကို စမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုသင့်ပါသည်။ တိကျသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် pump flow ၏တိကျမှု။
metering pump ၏အခြေခံသဘောတရား
Zhejiang Dongkai ပန့်နည်းပညာ Co.,Ltd. Metering pumps၊ Metering Pump ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးထိုးကိရိယာအစုံအလင်နှင့် အခြားထုတ်ကုန်စီးရီးများ၏ ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းအတွက် အထူးပြုနည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။(China metering pumpï¼‰
ဆေးထိုးကိရိယာတွင် အဓိကအားဖြင့် solution tank၊ agitator၊ medicine tank, metering pump, liquid level gauge, electric control cabinet, pipeline, valve, safety valve, back pressure valve, check valve, pulsation damper, pressure gauge၊
Metering pumps၊ Dosing pumps၊ Solenoid dosing pumps သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Add: Tingpang စက်မှုပန်းခြံ၊ Sanmen ကောင်တီ၊ Zhejiang
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Zhejiang Dongkai Pump Technology Co., Ltd. - Metering Pump - All Rights reserved.